အဘယ်ကြောင့် pcb ဘုတ်အဖွဲ့ဖိုင် Gerber ဒေတာကူးပြောင်းပြီးတော့ဘုတ်အဖွဲ့ကိုကိုင်တွယ်ရပါမည်? - Shenzhen WMD Circuits, Ltd
အချိန်: 2009-04-07 hits:
အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်, နေသမျှကာလပတ်လုံးကဖိုင်အပြောင်းအလဲနဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ကပါဝင်ပတ်သက်အဖြစ်, အများဆုံးအင်ဂျင်နီယာများ PCB ဘုတ်အဖွဲ့ဖိုင်တွေဒီဇိုင်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့စက်ရုံသို့တိုက်ရိုက်ပို့ပေးဖို့နေသားတကျရှိပါသည်. ကမ်ဘာပျေါတှငျလူသုံးအများဆုံးနည်းလမ်း PCB ဖိုင်တွေ Gerber ဖိုင်တွေသို့နှင့်တူးဖော်ခြင်း data တွေကိုဒီဇိုင်းနှင့် PCB စက်ရုံသို့ပေးပို့ပြီးနောက် convert ရန်ဖြစ်ပါသည်, အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်သင့်“ပိုမိုလုပ်ဆောင်?”
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့် PCB အင်ဂျင်နီယာများ PCBs ၏ကွဲပြားခြားနားသောနားလည်မှုရှိသည်ကြောင့်, အဆိုပါ PCB စက်ရုံထဲကနေပြောင်းလဲအဆိုပါ Gerber ဖိုင်များကိုသင်လိုချင်တာတွေမကျမည်အကြောင်း. အဆိုပါ PCB ရေးဆွဲဒီဇိုင်းသောအခါအသင် PCB ဖိုင်ထဲမှာအစိတ်အပိုင်းများ၏ parameters များကိုသတ်မှတ်လိုလျှင်, သငျသညျ Don \_ '' t ကိုဤအလိုခငျြ. အဆိုပါ parameters များကိုအချော PCB အပေါ်ပြသနေကြသည်. သင်ကရှင်းပြခဲ့ကြပြီမဟုတ်. အဆိုပါ PCB စက်ရုံအတွက်သခွားသီးပန်းချီအညီချော PCB ပေါ်ဤအကြောင်း parameters တွေကိုကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်. ဒါကပဲဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သင်ကိုယ်တိုင် file တစ် Gerber ဖို့ PCB ဖိုင်ပြောင်းလျှင်ဒီကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်. အဆိုပါ Gerber ဖိုင်တစ်ခုကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်း lithography format နဲ့ဖိုင်, အရာသည် RS-274-D နှင့်သည် RS-274-X ကိုကို formats ပါဝင်သည်. သည် RS-274-D ကိုအခြေခံ Gerber format ကိုခေါ်တော်မူသည်နှင့်တစ်ဦး D ကိုကုဒ်ဖိုင်ကအဖော်ပြုပေးရမည်. ဂရပ်ဖစ်၏ပြီးပြည့်စုံသောဖော်ပြချက်; သည် RS-274-X ကိုတိုးချဲ့ Gerber format နဲ့ဟုခေါ်သည်, အရာကိုယ်တိုင်က: D ကုဒ်သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်. အသုံးအများဆုံး CAD software ကိုအဲဒီနှစျခု format နဲ့ဖိုင်တွေ generate နိုင်ပါတယ်.
တူးဖော် data တွေကိုလည်းအမျိုးမျိုးသော CAD software ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်. အထွေထွေ format နဲ့ Excellon ဖြစ်ပါသည်; တူးဖော်ဒေတာခြင်းမရှိဘဲ, ဒါပေါ့, PCB ထုတ်လုပ်မရနိုင်.
GBL --- အောက်ခြေအလွှာ
GTO --- ထိပ်တန်း silkscreen
GBO --- အောက်ခြေ silkscreen
GTP --- TopPaste (လေဆာရောင်ခြည်တန်းပလိတ်များအတွက်)
GTS --- ထိပ်တန်းဂဟေဆက်မျက်နှာဖုံး
GBS --- အောက်ဂဟေဆက်
G1--- ပြည်တွင်းရေးသဲလွန်စအလွှာ 1
G2--- ပြည်တွင်းရေးဝါယာကြိုးအလွှာ 2
GM1 --- စက်မှုအလွှာ 1
GM2 --- စက်မှုအလွှာ 2
GD1 --- လေ့ကျင့်ခန်း Drawing
GPT --- ထိပ်တန်း pad ပါအရှင်ဘုရား
GPB --- အောက် pad ပါအရှင်ဘုရား
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, Shenzhen WMD Circuits, Ltd. High-တိကျစွာ Multi-layer ကိုဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အလေးပေး နှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားကုန်ထုတ်လုပ်မှု. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ဒါကြောင့်သခင်စက်မှုလုပ်ငန်းများအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူဖောက်သည်ပေးနိုငျ.
နောက်တစ်ခုA ကောင်းဆုံး PCB ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူ --- WMD Circuits